Nkwurịta Okwu A Na-agbanwe Na Worlọ Ọrụ | Martech Zone
Izu a, Anọ m na nzukọ abụọ na ụlọ ọrụ dị iche iche n’izu a ebe nkwukọrịta dị n’ime bụ mkparịta ụka:
Nke mbụ bụ Sigstr, otu email mbinye aka ahia ngwa oru ijikwa aha nnabata email n'ofe ụlọ ọrụ ahụ. Isi okwu dị n'etiti ndị otu dị iche iche bụ na ndị ọrụ na-elekwasị anya na ibu ọrụ ha ma ọ bụghị mgbe niile ka ha na-ewepụta oge iji kpọtụrụ akara ahụ na mpụga na atụmanya na ndị ahịa. Site na ijikwa ntinye aka email n'ofe otu nzukọ, Sigstr hụ na mkpọsa ma ọ bụ onyinye ọhụụ na-agwa onye ọ bụla natara email.
Nke abụọ bụ Dittoe PR, nke anyị ụlọ ọrụ mmekọrịta ọha na eze, ndị kwusiri ike banyere mkpa ọ dị slack n'ime nzukọ. Na ọtụtụ ndị ọrụ PR na-achọgharị, ha na-achọpụta ohere dị n'ofe ndị ahịa ha. Slack enyerela aka na ndị otu na-abawanye nsonaazụ na ndị ahịa ha.
Dika ulo oru na agbanwe ihe ndi ozo na iguzosi ike n'ihe nke ndi ahia na ijide ha, ha nwekwara ike icho imeghari nlezianya na nkwekorita ahia na ndi otu. Ma ọ dịkarịa ala, nhazi na ịzụ ahịa ahịa dị oke mkpa… na ihe niile nwere na nkwukọrịta.
Taa ndị ọrụ ọha mmadụ na-ahụkarị nkwukọrịta ozugbo wee họrọ ịnata nzaghachi n'oge a, ọ bụghị otu ụzọ n'ụzọ anọ iji kwalite n'ụzọ. Mụta otu nkwurita okwu ọhụụ siri ike na etu azụmahịa azụmaahịa si eme ka nrụpụta na njikọta gasị site na ịnabata ya nke ọma.
Dashboards bụ ihe dị oke egwu maka ime, nkwukọrịta oge na teknụzụ ndị ọzọ na-akụ ahịa na-etinye ọtụtụ nri nke data na ntanetị dị egwu. Visuals dị oké egwu:
65% nke ndị mmadụ bụ ndị mmụta mmụta
40% nke ndị mmadụ na-aza nke ọma karịa mgbe agbakwunyere visuals karịa ka ederede naanị
90% nke ozi a na-ebute na ụbụrụ na-ahụ ụzọ
Ọdịnaya nwere visuals na-eweta nsonye 94%
80% nke puku afọ ga-achọ ịnata nzaghachi na ezigbo oge
Hoopla bụ arụmọrụ mgbasa ozi arụmọrụ iji bulie njikọ na nkwukọrịta na data dị ndụ, ndị isi, egwuregwu na nnabata. Ha mepụtara ihe omuma a, Mgbanwe nke Nkwukọrịta Ọrụ.
Tags: ụbụrụdashboardgamificationndị isina ebe nchekwammataKpooslacknkwurịta okwu na-ahụ anyanghọta nghọtammụta mmụtaanyankwukọrịta ọrụ